That's so good, right?: My First Sex In A Men's Public Restroom: Part 1
အခုရေးပြမယ့် အကြောင်းအရာတွေက ကျွန်တော့်အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးစမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကြောင်းအရာအတွေ့ အကြုံများဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်စလူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အများသုံးအမျိုးသားအိမ်သာမှာ လူပျိုရည်စပျက်ခဲ့သော အကြောင်း အရာများပေါ့နော်။ ဟုတ်ပါတယ် အမျိုးသားတွေအသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသားအိမ်သာတစ်ခုမှာပါ။ ၂၁ရာစုမှာ ကျွန်တော့်လို ဆယ်ကျော်သက် တစ်ယောက်က လိင်တူခြင်းအတွေ့အကြုံကို ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ စကြုံရတာကိုရော ပြီးတော့ အရွယ်ရောက်နေပြီးသား ဂေးငနဲတွေက ဒီလို မြေအောက်အိမ်သာတွေမှာ ဘာကြောင့်များ စတည်းချကြတာလဲဆိုတာကိုရော မစဉ်းစားတတ်ပါဘူးလေ။ ကျွန်တော့်အသက်က ၁၈နှစ် ပြည့်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ရုပ်ရည်အားဖြင့် ၁၅နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ပုံဟန်ဆိုတော့ သူတို့တွေအတွက် သတိထားစရာ အဲ သတိထားမိ ဟန်တူပါတယ်…. ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမလားပဲ။ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရရင် ကျွန်တော်က တကယ့်ကို ငရိုးလေးပဲပြောရင်ရ သလို အခုအရွယ်အထိ လိင်ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြရရင် Playboy မဂ္ဂဇင်းကိုကောက်လှန် -ွင်းထုရုံကလွဲလို့ တခြားအတွေ့အကြုံဆိုတာ တကယ့်ကိုမရှိတတ်ခဲ့တာပါ။ ဒီထက်ပိုပြောရရင် gay sex ဆိုတာကို အခုအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ထိ စဉ်းလည်းမစဉ်းစားဖူးဘူး ကြုံလည်းမကြုံဖူးဘဲ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တာနော်။
ကျွန်တော့် အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပြည့်တာနဲ့ လက်ထဲအရင်ရောက်လာတာက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခု ဒယ်ဒီ့လက်ဆောင်ပေါ့။ ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရခင်ကတည်းက တေးထားသော ဆိုင်ကယ်အမြန်မောင်းမယ် ဆိုင်ကယ် အမြန်စီးကွင်းတွေရှိရာ မြို့ပြင်ကိုသွားပြီး စီးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်က Honda Super 90 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးကို အသာထုတ်ပြီး မြို့ပြင်ဘက်ကို အသာလစ်ခဲ့တာပါပဲ အမြန်။ ဆိုင်ကယ်လေးစီးလို့ သိပ်မကြာပါဘူး ခရီးထွက်တိုင်း စိတ်လောနေကြ ကျွန်တော် ဆီးသွားချင်လာတယ်လေ….အဲဒါကြောင့် လမ်းတလျှောက် အမျိုးသားအိမ်သာ ဆိုင်းဘုတ် တတ်ထားတဲ့ စတိုးဆိုင်လေးတွေရှိမလား ကြည့်ကြည့်ပြီးမောင်းရတယ်။ လမ်းဆုံတစ်ခုကိုအကျော် ကုန်းကျော်တံတားတစ်ခုနံဘေးနား အရောက် မြေအောက်အိမ်သာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုတွေ့တာကြောင့် မလှမ်းမကမ်းက ယာဉ်ရပ်နားရာနေရာမှာ ဆိုင်ကယ်ကိုအသာရပ် ကာ ခပ်သွက်သွက် သွားလိုက်ရော။
ဆင်းရတဲ့ လှေကားတွေကလည်း မှောင်လိုက်တာ…မီးထွန်းထားတာကလည်း တစ်ပွင့် နှစ်ပွင့်…. လှေကားက တော်တော် ရှည်အောင် ဆင်းရတယ်။ အောက်ဆုံးကြမ်းပြင်လည်းရောက်ရော အလင်းရောင်က သိပ်မရှိ အနံ့အသက်က ဘယ်လိုပြောရ မယ်မှန်းမသိဘူး။ ၀ိုး… ကံကောင်းတယ်….အိမ်သာအခန်းတွေက အများကြီး အရှည်ကြီးပဲ အနည်းဆုံး အခန်း ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀လောက်ရှိမယ်ဗျ။ အိမ်သာ တစ်ခန်းကနေ တစ်ခန်း အလွတ်များရှိမလား ရှိမလား လျှောက်ကြည့်လိုက်တာမှာ ရှိသမျှ အခန်းတွေရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်လောက် အရောက် အခန်း ၁၇ လောက်မှာမှ တံခါးပွင့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခပ်သွက်သွက် လှမ်းဝင်သွားပြီ ဘောင်းဘီ ကြယ်သီးဖြုတ်အပြီးမှာ ရှေ့ဆက် ဇစ်လည်းမဆွဲ ဘောင်းဘီလည်းလျှောမချ ဘာဆို ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငြိမ်သက်သွားမိပါရဲ့။ ပြီးမှ ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုဖြေရှင်းတာပါပဲဆိုပြီး ကြွေကမုတ်မှာအသာထိုင်လိုက်တယ်။ အိမ်သာအခန်းကန့် ထားတာရဲ့ အောက်ခြေလွတ်နေတဲ့နေရာကို ငုံ့ အကြည့်မှာ ကျွန်တော် တံတွေးတောင်နင်သွားမိတော့မတတ်ဖြစ်ရော။ အမျိုးသားစီး ရှူးဖိနပ်နှစ်ရံက ခပ်နီးနီးအနေအထားနဲ့တွေ့ရ တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်သောလူက ကြမ်းပြင်မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ထားတဲ့ အနေအထားကို ပြောင်လက်နေတဲ့ ကြမ်းပြင် အဖြူရောင်မှာ ရောင်ပြန်အနေနဲ့တွေ့ရတာဗျ။ တံခါးရွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းအပေါက်ကိုတွေ့ရပြီး အဲဒီ့အပေါက်ကနေ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလည်း စဉ်းစားနေတုန်း အဲ့လူက တခြားနေရာကိုဆက်လျှောက် သွားတော့ နောက်လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုလာချောင်းပြန်ရော ပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက် နောက်တစ်ယောက် အိုး…။
`ကျွတ်´ သူတို့ဘာလုပ်မလို့လဲ ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး အိမ်သာလျှောက်လှမ်းတလျှောက်လည်း လူတွေအကုန်ပြည့်နေလား မသိ။ ကိုယ့်ဖာသာအိမ်သာတက်တာတောင် အေးဆေးမတက်ရဘူး အမြန်တက်စေချင်နေသလား သူတို့များအိမ်သာအရေးတကြီးတက် ချင်ကြသလားမသိဘူးဆိုပြီး အိမ်သာထဲ ဟိုသည် မျက်စိကစားကြည့်မိပြန်တော့ အိမ်သာဘေးနံရံထောင့်တစ်နေရာ သုံးပေအမြင့် လောက်မှာ ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းကြီးကြီးအပေါက်တစ်ပေါက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီအပေါက်က မုတ်ဆိတ်ပါတဲ့ ဘဲတစ်ပွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူ တစ်စုံကို ခပ်ဟဟအနေအထားနဲ့ တစ်ဘက်ခန်းကနေ လျှာပြူတစ်ပြူတစ်လုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပြန်ရောဗျာ။ ပထမတော့ အဲ့ဒီဘဲ ဘာလုပ်မလို့လဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ ဘယ်လိုမှ သဲလွန်စမရ မစဉ်းစားတတ်ဘူးလေ။ ဒီလူ တစ်ခုခု မကြားတကြားလှမ်းပြောလိုက်ဟန် တော့တူတယ် ဘာပြောလိုက်လည်း မသိဘူး။ အသံပိုကျယ် ပိုပြီးရှင်းအောင်သူ အော်ပြောတယ် ``ငါကြည့်ချင်လိုက်တာ ပြပါလား´´။ သူဘာကြည့်ချင်တာလည်း ဘာပြောနေမှန်းကို အဓိပ္ပါယ်မပေါက်။ ``ကြည့်ရအောင် ပြစမ်းပါကွ´´ဒီလူဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး သူကြည့်ချင်ရအောင် ဘာမှလည်းအထူးအဆန်းမရှိပါလား။ ``ဘာကြည့်မှာလည်းဗျ´´ ကျွန်တော်မကြားတကြားပြန်မေးလိုက်တော့ သူက ``မင်း-ီး လေ….မင်းဟာကိုကြည့်ချင်တာ ပြပါ´´ တဲ့တိုးကြီးပြောရော။
Woo !!! ခေါင်းမွှေးတွေတောင်ထောင်သွားမိတယ် ဒီလူဘာကြောင့် ကျွန်တော့်ငပဲကိုကြည့်ချင်ရတာလဲမသိဘူးဗျ။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဘယ်လိုခံစားနေရလည်းဆိုတော့ ဆယ်ကျော်သက်သွေးကြွနေတဲ့အရွယ်လည်းဖြစ် ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုတခြားသူကို ဂုဏ်ယူစဖွယ်ပြသရမှာ ပြလည်းပြချင် ယောက်ျားခြင်းပဲဆိုတော့ ကြွားလည်းကြွားချင်သေးဖြစ်နေတာ။ ပြီးတော့ တစ်ဘက်ကလူက ဘယ်သူလည်းမသိသလို နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တွေ့ရမယ့်လူလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ အင်း….သူဘာကိုဆိုလိုတာလည်း သိပ်မသေချာတာ နဲ့ အဲ့လူကို ခပ်ကျယ်ကျယ်လေးပြန်မေးလိုက်တယ် ``ဘာလုပ်မလို့လဲ?´´ ။ ``မင်း-ီး ကောင်လေး…မင်း-ီးကိုငါကြည့်ချင်နေတာ´´ ဒီထက်သေချာတာမရှိတော့ဘူး….သူဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ ရှင်းသွားပြီ။ အသက်က ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြစ်ပေမယ့် ပစ္စည်းက ငထွားဆိုတော့ တပါးသူကိုပြရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တင် တဖြည်းဖြည်းမတ်ပြီးကြီးလာတယ်ဗျ။ အဲ…ကျွန်တော်က သာမန် ဆယ်ကျော်သက်ပါပဲ အရပ်က ၅ပေ ၆လက်မ ကိုယ်အလေးချိန်က ၁၃၀ပေါင် ကျစ်လစ်တောင့်တင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အသက် ၁၈နှစ်ထက် ငယ်တယ်လို့ထင်ရသူပါ။ သေချာပြောနိုင်ပါတယ်ဗျာ အသက် ၁၈ အရွယ်ဆိုတာထက် ၁၅နှစ်လောက်ပဲထင်ရလောက်အောင် နုပျိုတယ် ဆိုတာ။
အခု ကျွန်တော့်ငပဲက ဘယ်လောက်ထိထွားလာပြီဆိုတာ မသိသေးဘူး။ အရင်လူပျိုဖြစ်ကာစ တိုင်းကြည့်မိတာကတော့ ၆လက်မခွဲ ၇လက်မနီးပါးရှိတယ်….ခပ်တုတ်တုတ်နဲ့ ထိပ်အရေပြားကလည်းဖြတ်ပြီးသားပေါ့နော်။ ဟုတ်တယ်….ဒစ်ထွားထွားနဲ့ ဆယ်ကျော် သက်တစ်ယောက်ပါဗျ။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်တော့ ပေမှီဆိုဒ်မှီ လှတပတဆိုတာ သိတော့သိပြီးသားပါ။ လူတိုင်း ယောက်ျားတိုင်းလည်း ဒီဆိုဒ်အတိုင်းရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ကတွေးထင်ထားပါတယ်။ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ပစ္စည်းထုတ်ကြွားရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မတ်ထောင်လာရသလို ဘာကြောင့်ကြည့်ချင်သူကိုမပြရဲရမှာလဲ နော်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဘောင်းဘီကိုသေချာလျှောချ ခပ်မတ်မတ် ဖြစ်နေတဲ့ -ိင်တံကို နံရံအပေါက်တည့်တည့်ကို တန်းနေအောင်ချိန်တန်းပြီးပြလိုက်တယ်။ HAH !!! အာ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကိုလည်းမြင် ရော သူ့နှုတ်ဖျားက ``အိုး…ငါ့ကောင် ပစ္စည်းက မိုက်လှချီလား´´တဲ့။ ကျွန်တော် ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ အတွေ့အကြုံနည်းသေးသော ကလေးတစ်ယောက်ဆိုတော့ ``ကျေးဇူး´´လို့ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။
သိပ်မကြာပါဘူး အဲ့လူက ``ထိုးထည့်လိုက်´´တဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ သူအဲ့လိုပြောလာမလားတွေးထင်မိတုန်း သူပြောလာတော့ ပိုပိုပြီး confirm လုပ်တဲ့အနေနဲ့ထပ်မေးမိရော။
သူ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြောတယ် ``ထိုးထည့်လိုက်´´
အတွေ့ အကြုံနည်းတာကခက်တယ် သူ့ကို ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမှန်းမသိဘူး ``ဘာကိုထိုးထည့်လိုက်ရမှာလဲဗျ?’’ လို့ပဲထပ်မေးမိတယ်။ သူရယ်တော့ ရယ်သွမ်းမသွေးပါဘူး ကျွန်တော့်ရဲ့ခပ်အအ အမေး ပေါ်ကိုလေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဆီက ခပ်သဲ့သဲ့ရယ်သံလေးထွက်လာပြီး ``အပေါက် ကောင်လေး….အပေါက်ထဲကို မင်း-ီးတစ်ချောင်းလုံး ထည့်လိုက်´´ တဲ့။
Woo !!! တကယ့်ကို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဖြစ်ပြီး ကယောက်ကတမ်းနဲ့သူ့ကို ``ဘာလို့လဲဗျ´´လို့မေးမိပြန်တယ်။
အဲ့ဒီလူက ``မင်း-ီးကိုအပေါက်ထဲထိုးထည့်လိုက်ရင် ငါက -ုပ်မလို့ပေါ့ကွ´´ Woo !!! ဒီကမ္ဘာမှာ -ုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို မသိကျိုးကျွံ ဖြစ်နေသေးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက် ဘယ်မှာများသွားရှာလို့ရမလဲ သူတွေးထင်သွားမှာသေချာတယ်။တက်ကြွတဲ့သူ့လေသံ သူ့ပြောစကားတွေကြောင့် ကျွန်တော့်ငပဲခမျာ တဖြည်းဖြည်းမာသထက်မာလာပြီးနောက် ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲ က နှလုံးခုန်သံဟာ လည်း ပိုပိုမြည်းဟည်းလာပါရဲ့။
``အာ…ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ပါဘူး´´ လို့ ဘေးအခန်းကလူကိုလှမ်းပြောလိုက်ပြီးနောက် အိမ်သာအခန်းထဲက ထွက်ခွာသွားဖို့ ကျွန်တော် စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုအာရုံစိုက်နေတာသ ဘေးအခန်းကလူတစ်ယောက်တည်းတင်မကဘူး တခြားလူအများအပြားဖြစ်နေ ၀ိုင်းကြည့်နေတယ်လို့ ခံစားရလို့ပါ။ ၀င်ပေါက်တံခါးသော့ပေါက်ကရော ညာဘက်အခန်းက အပေါက် ကျဉ်းလေးကရော ချောင်းကြည့်နေကြတာများ သားကောင်ကို အမဲဝိုင်းဖျက်တော့မယ့်အတိုင်း။ သုံးဖက်သုံးတန်က လူသုံးယောက်က ကျွန်တော့် ငထွားကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတာ တမျိုးကြီးပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် အိမ်သာစက္ကူသုံးလေးရွက်လောက်အမြန်ယူ ကိုယ်လက်သန့်စင် တာကိုအမြန်လုပ်ရတယ် ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော် ခပ်မြန်မြန်လုပ်နေတာကိုမြင်လို့လားမသိ ဘယ်ဘက် အခန်းကလူက ``ဟ အမြန်မလိုပါနဲ့ကွ ကောင်လေးရ….ဖြေးဖြေး…ဖြေးဖြေးလုပ်စမ်းပါကွာ´´ပြောရော။ သူ့အပြောကြောင့် ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ ကြောက်လန့်စိတ်နည်းနည်းဝင်လာရကာ အိမ်သာရေကမုတ်က ခလုပ်ကိုဆွဲချတာတွေကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းပဲ အရှိန်လျော့လုပ်ရပါတယ်။ ခဏနေကလူက ထပ်ပြောပြန်တယ် ``အလျင်မလိုစမ်းပါနဲ့ကွာ အေးဆေးပေါ့….မင်းတံခါးရှေ့ကလူနဲ့ တော့ နေရာ တစ်ခုခုလိုက် မသွားချင်လောက်ပါဘူးနော်´´။
``Shit!!´´ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ထင့်ကနဲဖြစ်နေတုန်း ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ အိမ်သာတံခါးရှေ့က လူကိုမျက်ဝါးထင်ထင် ဘွားကနဲမြင် လိုက်ရတဲ့နည်းတူ အခန်းတံခါးလည်းပွင့်လာရော။ ကျွန်တော်ရဲ့ ထိတ်လန့်နေတဲ့ စိတ်တွေ ငယ်ထိပ်တက်ဆောင့်ပါပြီ ပြေးပေါက်မရှိ။ ကြွေကမုတ်မှာအမြန်ပြန်ထိုင် မာတောင့်နေဆဲ-ီးကို အောက်ကိုငိုက်ထား အပေါ်ကလက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကိုယှက်လို့ဖုံးအုပ်ထားလိုက်သည် ပေါ့နော်။ ဘယ်ဘက်မှာရပ်နေတဲ့လူကြီးက ``ဟေ့ ကောင်လေး´´လို့အသံပြုပေမယ့် ကျွန်တော်စကားတစ်ခွန်းမှာမတုန့်ပြန်မိ။ အဲ့လူကြီးက ``ဟေ့ ကောင်လေး´´လို့ထပ်ပြီး အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ခေါ်တော့ ကျွန်တော်က ``ဘာလဲဗျ´´လို့ပြန်မေးမိပါတယ်။
သူက ``မင်း -ီးစုပ်ပေးတာကိုခံစားဖူးလား´´လို့မေးတယ်ဗျ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုတောင်ရောက်နေပြီ ဆယ်ကျော်သက်တိုင်းကို မေးကြည့် blow job ဆိုတာဘာလဲသိကြတာကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ကတော့ ``ဟင့်အင်´´လို့ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်လေ။ အဲ့လူက နည်းနည်း ရယ်သွမ်းသွေးပြီး ``အိုး….ကောင်လေး…မင်းတော့ အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေထဲကတစ်ခုကိုလွတ်သွားပြီ´´ပြောပြန်ပေမဲ့ ကျွန်တော် စကားတုန့်ပြန်မပြောမိဘူး။ သူက ``blow job က ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးအရသာတစ်ခုပဲကွ´´လို့စကားဆက်သေးတယ်။ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော် blow job လုပ်ပေးတာကို မခံယူခြင်းဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရပါ့မလဲ။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးတိုင်း တစ်စုံတစ်ဦးက ကိုယ့်ကို blow job ကောင်းကောင်းပေးတာကို ခံစားချင်ကြသူကြီးပါပဲ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရည်းစားကောင်မလေးဆီကပဲ လိုချင်ကြမှာပါ။ ဟုတ်တယ် ဟုတ်?
Gay Sex ဆိုတာကြီးကို အခုခေတ်မှာတင်မက အရင်ခေတ်ကတည်းက ပြန်ပြောလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအသွင်ဆောင်နေခဲ့တာ။ ကျွန်တော့်ညာဘက်က ခပ်တောင့်တောင့်ငနဲက ``ကောင်လေး မင်း-ီးကိုနောက်တစ်ကြိမ်လောက်ပြန်ကြည့်ရအောင် ပြ´´တဲ့။ အခု… ကျွန်တော့်ရဲ့ sexual hormones တွေက ဖုန်းကာထားတဲ့လက်တွေကိုဖယ်ရှားပြီး မတ်နေဆဲငပဲကိုအပြင်ထုတ်လိုက်ဖို့ လှုံ့ဆော် နေသလို ကျွန်တော့် ဦးဏှောက်ကလည်း ဒီနေရာကနေအမြန်ထွက်ခွာသွားဖို့တိုက်တွန်းနေပါပြီ။
ညာဘက်ကလူက ``မင်း -ီးကိုနောက်တစ်ခါလောက်ကြည့်ရအောင်´´
ဘယ်ဘက်ကလူက ``ဟုတ်တယ် ငါတို့ကို မင်း-ီးကိုပြစမ်းကွာ ကောင်လေး´´၊ ပြီးတော့ ``မင်း-ီးကိုငါတို့ကိုပေးမကြည့်ရင် မင်း ဒီနေရာက ထွက်သွားလို့ရမယ်မထင်နဲ့´´တဲ့။
ဟူး….ဒီကိစ္စကို ကိုယ့်ဖာသာအချိုးချကြည့်မိတော့ ကျွန်တော့်ဦးဏှောက်က ဒီကအမြန်ထွက်သွားဖို့တိုက်တွန်းနေသလို ဟော်မုန်းတွေက တော့သူတို့ကိုပြလိုက်ဖို့နှိုးဆွနေတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားရတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုလိုကိုဖြစ်လို့။ သူတို့ကို ကိုယ့်ပစ္စည်းကို အမုန်းခံမပြဘဲ ဒီအိမ်သာခန်းထဲကထွက်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လည်း နည်းနည်းလေးတော့ကြည့်ခွင့်ပေးလိုက်တာက ကောင်းမယ်။ ဟုတ်တယ်နော် ?
အင်း….သူတို့ရဲ့လောဆော်သံတွေက အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုကြည့်ချင်နေသူတွေကို ခပ်ကြွားကြွား လေးထုတ်ပြချင်စိတ်ဖြစ်မိတာပေါ့။ ဟေး…..ကျွန်တော့်အသက်က ၁၈နှစ်ပြည့်ကာစဆိုတာ သတိထားဦးလေ။ ကျွန်တော့် ညာဘက်ကလူ က အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ``ကြည့်ရအောင် ကောင်လေးပြ´´တဲ့။ နောက်တစ်ကြိမ် ကျွန်တော်ဘာမှ မလှုပ်ရှားမိ။ သူ့လေသံက ကျွန်တော့် ကို အမိန့်ပေးသံပေါက်နေသလိုပဲ..`ကောင်လေး…ပြလေကွာ မင်း-ီးကိုပြောတာ´တဲ့ဗျာ။ ဒီတော့ ကျွန်တော် နောက်ဘက်က နံရံကိုခပ်မှီ မှီလေးနဲ့ အနေအထားပြင်ထိုင်လိုက်ကာ ကျွန်တော့် ငပဲကိုလေထုထဲ တငေါက်ငေါက်ပြန်လည်ဖြစ်စေလိုက်တယ်။ အခုအချိန်ဝယ် ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ကွမ်းသီးခေါင်းမှာ ၀ိုင်းစက်တင်းကားနေပြီး ခရမ်းရောင်တောင်ပြေးစပြုလာပြီလို့ပြောရမယ် အစွမ်းကုန်မတ်ထောင်နေ တော့တာ။ သွေးလျှောက်မြန်ပြီး တဆတ်ဆတ်ခုန်နေသလိုဖြစ်နေတယ်လို့တောင် ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံတွေဟာလည်း သွေးတိုးသံတွေကြားရ ရင်ခုန်သံတွေအပြင်ကကြားရလောက်အောင်ကိုဖြစ်လာမိတယ်ပေါ့နော်။
တခြားအချိန်သာဆိုရင် -ွင်းထုပြီး တင်းကြပ်နေသမျှကိုဖြေလျော့လိုက်တာကြာပြီ။ နားထဲကတော့ ကြားလိုက်ရသေးတယ် ``ဟေ့ ကောင်လေး မင်း-ီးက အသင့်အနေအထားဖြစ်နေပြီ ငါ-ုပ်စမ်းပါရစေ´´တဲ့။ နောက်တစ်ကြိမ် ကျွန်တော်ဘာမှကိုမလုပ်မိ။ ``ကဲ အပေးအယူကဘာလဲ? ဒီအပေါက်ထဲကနေ မင်းပစ္စည်းကို ထိုးထည့်လိုက်ပါကွာ မင်း-ီးကို ငါကောင်းကောင်း blowjob လုပ်ပေးမယ်ဆို တာမယုံမကြည်ဖြစ်နေတာလားကွ´´ သူပြောနေတာတွေနဲ့တင် ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ဖိုးပြချင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာသူမသိပါ။ ကျွန်တော် မတ်တပ်ရပ်ပြီး နံဘေး နံရံကအပေါက်နားကပ်သွားဖို့အလုပ် အို မလုပ်တာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး တွေဝေကာ ဆက် မလျှောက်ဖြစ်။ ဒါကြောင့် ကြွေကမုတ်မှာပြန်ထိုင် မတ်နေတဲ့ ငပဲကိုလက်နဲ့ပြန်အုပ်ကိုင်ထားလိုက်တယ်။ ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ လူကြီးက `` မရူးစမ်းပါနဲ့ ကောင်လေးရာ….မင်း-ီးကို ဒီအပေါက်ထဲထိုးထည့်မှာထည့်စမ်းပါ….မင်းသိပါတယ်….မင်း-ီးကိုသူများစုပ်ပေးတာ ခံစားချင် နေတယ်မဟုတ်လား´´ဆိုပဲ။
အာ….ဘယ်လိုစကားလုံး ဘယ်လိုစကားတွေပြောရမှန်းမသိပါဘူးဗျာ….ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်နေမှန်း ဘာလုပ်သင့်မှန်း ဘာကိုပိုပြီးလုပ်ချင်ခဲ့မှန်း မမှန်းဆတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ blowjob ဟုတ်တယ် အဲဒါလုပ်ပေးတဲ့ ဖီလင်ကို လက်တွေ့ခံစားရမှာ။ `အိုး´ အိမ်သာအခန်းတံခါးဝက မတ်တပ်ရပ်ကြည့်နေသူရော ၊ ဟိုဘက်ခန်းကနေ ချောင်းကြည့်နေတဲ့သူတွေရော အိမ်သာအခန်းနံရံကို အားမလိုအားမရ လက်ဝါးနဲ့ရိုက်လိုက်သံက ကျွန်တော့်ကျောပြင်ထဲစိမ့်ပြီးလန့်သွားစေတယ်ဗျ။ ကြွေကမုတ်မှာ ထိုင်ပြီးသေးကြောရှည်နေတာက ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်သံကလည်း တိုင်းရင်းသားတစ်ခုခုရဲ့လေသံဝဲနေသလိုပဲ ဆိုရမယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားတာတွေရော အမိန့်သံဆန်တဲ့ ပတ်ပတ်လည်ကလူတွေကြောင့်ရော ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေကဆုန်ပေါက်လာ ကြပြီ။
သူက ``ဟေ့ ကောင်လေး….မင်း ဒီအပေါက်ထဲကို မင်းအတံထိုးမထည့်ဘဲ ထွက်သွားဖို့မစဉ်းစားနဲ့´´လို့ပြောပြန်တယ်။ သူ ခဏတော့ အသံတိတ်သွားတယ်…ပြီးတော့ အသားကုန်ဟစ်တော့တာပဲ ``မင်းကို အခုစလုပ်တော့လို့ခိုင်းတာကွ´´။ ဘာပြောရမှန်းမသိဘူးဗျာ အဲ့လူ အော်လိုက်သံက ကျွန်တော့်ကျောပြင်ထဲစိမ့်ကနဲဖြစ်အောင်လန့်သွားစေတာတော့အမှန်။ သူက တော်တော့်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ခြိမ်းခြောက်တာ။ ဒီတော့ ကျွန်တော် ခပ်မြန်မြန်မတ်တပ်ရပ် အပေါက်ရှိရာဘက်ကိုဦးတည် ဘောင်းဘီကို ခြေဖမိုးပေါ် ပုံကျတဲ့အထိလွှတ်ချလိုက်တော့ ဆယ်ကျော်သက်ပေမယ့် ဒုံးပျံတစ်စင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ ငပဲက လေထဲမှာ တရမ်းရမ်းကိုဖြစ်လို့။ တံခါးဝက ရပ်ကြည့်နေတဲ့လူကလည်း တစ်ဖက်ခန်းကလူနီးပါး အလောတကြီးလေသံနဲ့ ``ထည့်လိုက်တော့ သွင်းလိုက်တော့ ကောင်လေး…အပေါက်ထဲကို မင်း-ီးတစ်ချောင်းလုံး´´တဲ့။ ဒီလူက နားလည်ဖို့လွယ်ကူတဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ပေမယ့် သူဘာဆိုလိုတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။ အပေါက်နားကို တဖြည်းဖြည်းတိုးကပ် ကျွန်တော့် ငပဲရဲ့ကွမ်းသီးခေါင်းလေး အပေါက်နားကို အရောက် ကျွန်တော် တုန့်ဆိုင်းသွားရော။ ဟိုဘက်ခန်းကလူက နံရံကို ဖြန်းကနဲရိုက်လိုက်ပြန်ကာ `အပေါက်ထဲ ထိုးထည့်လေ ဟေ့ကောင်´လို့ စိတ်ဆိုးတဲ့လေသံနဲ့အော်တယ်။ ကျွန်တော့်အဖေကလည်း ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲ….သူ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဆိုးအော်ဟစ်တဲ့အခါ ဟေ့ကောင်ဆိုတဲ့ ခပ်ထန်ထန်အသံနှင့် ဆက်ဆံတတတ်တာကြောင့် အခု အိမ်သာအခန်းဘေး ကလူတွေအော်ဟစ်ကြမ်းတမ်းမှုက ကျွန်တော့်ကို ကြောက်စိတ်တကယ့်ကိုဝင်စေပါတယ်။ တကယ့်ကို ဖျားတာ…။
ကျွန်တော် တွန့်ကနဲဖြစ်သွားရကာ ရှေ့ကိုတိုး နံရံကအပေါက်ထဲကို ဒစ်တစ်ချောင်းလုံးလျောကနဲသွင်းပေးလိုက်တော့တယ်ဗျာ။ တထင့် ထင့်နဲ့ စိုးရိမ်မှု….ကြောက်လန့်မှု…..စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေါင်းများစွာဖြင့် ကျွန်တော် စက္ကန့်အတော်ကြာစောင့်ဆိုင်းမိပါတယ်။ နောက်တော့ နွေးထွေးသော စိုစွတ်ချောမွေ့သော နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ ကျွန်တော့် -ိင်တံအရင်းထိကိုတင်းကြပ်စွာလျောကနဲ ရစ်ပတ်စုပ်မျိုလိုက် တာကို ခံစားလိုက်ရတာကြောင့်….``အိုး….´´ဆိုတဲ့အသံကြီး ဘယ်လိုမှမတားနိုင်စွာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းက ထုတ်အော်လိုက် မိရော။ ခံစားရလိုက်တဲ့ ဖီလင်က တကယ့်ကိုမိုက်တယ်။ သူ့ပါးစပ် အာခံတွင်းထဲထိ လျောကနဲဝင်သွားလိုက် လျောကနဲပြန်ထွက်လိုက်ဖြစ် အောင် ခေါင်းကိုတလှုပ်လှုပ်နဲ့လှုပ်ရှားနေကာ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေကလည်း ကျွန်တော့် ဒစ်ကို တင်းကြပ်နေအောင်စုပ်ပြုထားတာများ အစပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ဘယ်လို သတ်မှတ်ခံစားရမယ်မှန်းမသိတဲ့ မယုံနိုင်စရာဖီလင်မျိုးကို ရရှိတဲ့အထိ ကျွမ်းကျင်တဲ့အပြုအစုက လန်း လွန်းပါတယ်။ သူ ခပ်မြန်မြန်အထုတ်အသွင်း စုပ်မှုတ်နေရာကနေ တကယ့်နှေးလွန်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ပြောင်းလဲ ကစားတော့လည်း ကျွန်တော့် ရဲ့ ငယ်ရွယ်သောဆယ်ကျော်သက်ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံးဖီလင်ကိုပိုင်ဆိုင်ရပြန်သည်ပေါ့……နော်။
Alex Aung (1 April 2014)
Posted by Alex Aung at 4:12 AM